Aqriso: 7 caqabad oo DF ay xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho ka dhaxleyso | Caasimada Online
Home Warar Aqriso: 7 caqabad oo DF ay xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho ka dhaxleyso
Aqriso: 7 caqabad oo DF ay xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho ka dhaxleyso
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Somalia ayaa dib u xirtay waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho inta ay ka dhamaaneyso 5-ta maalin ee xoriyada.
Dowlada ayaa ciidamo badan dajisay dhammaan isgoosyada magaalada Muqdisho kuwaa oo xanibay isu socodka gaadiidka raaxada iyo kuwa BL-ka oo ay raacan dadka shacabka.
Ciidamada ayaa gaadiidka dagaalka ku jaray dhex bartanka waddooyinka iyo waddooyinka laga soo fuulo laamiga Makka al-Mukarama.
Xirnaanshiyaha waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa saameyn lixaad leh ku yeesha xoogsatada iyo ardayda, waxaana xusid mudan in xitaa xirnaanshiyaha waddooyinka ay saamey ku yeelato shaqaalaha dowlada oo aan helin waddo ay u maraan shaqooyinkooda.
Haddaba xirnaanshiyaha waddooyinka ee dhaqan u noqday Dowlada, ayaa waxaa ka dhalankara 7 arrimood oo dhibaato u abuuri kara dowlada Somalia ee aan ka fakerin danta danyarta u nolol doonta goobahooda shaqo.
HOOS KA AKHRISO 7 ARIMOOD OO KA DHALANKARA XIRNAANSHIYAHA BADAN EE WADDOOYINKA MUQDISHO
1-Kacdoono ka dhan ah dowlada iyo dadaaladeeda ku aadan xakameynta amniga.
2-Hoos u dhac ku imaada kalsoonida ay Shacabka u hayeen Dowlada sanadka iyo barka jirta.
3-Is gacanqaad dhexmara shacabka iyo ciidamada iminka ay ka dhexeyso wada shaqeynta yar.
4-In shacabka Muqdisho ay mushkilad u arkaan dowlada Somalia ee hadda jirta, maadaama dowladihii hore aysan xiri jirin waddooyinka saacado ama maalin kabadan.
5-Shacabka oo xirnaanshiyaha waddooyinka u qaadan kar caburin lagu hayo shaqooyinkooda iyo baadi-goobka nolol maalmeedkooda.
6-Mucaaradka oo maslaxad weyn u arka caburinta shacabka si ay isku tusaan dowlada iyo shacabka iminka uu xiriirka wanaagsan ka dhexeeyo.
7-Shacabka oo xirnaanshiyaha badan wadooyinka Muqdisho ka qaadi kara inay dib u milicsadaan xiliga ay maleeshiyaadka gacanta ku heyn jireen dalka oo aanu jirin cajuub.
Si kastaba ha ahaatee, Dowlada Somalia ayaa waxaa la gudboon inay u daneyso shacabkeeda maadaama aanu jirin sabab xiligaan loo xiro waddooyinka.
Caasimada Online - March 8, 2021
Somali President Farmajo Disregarded the Constitution and Embraced Dictator’s Playbook Somali patriots, including moderate Islamists are haunted by how candidate Mohamed Abdullahi “Farmajo” fooled them...